Fepetra sy fepetra fampiasana finday
Momba ny Application
1.1. Tongasoa eto amin'ny mForce365 avy amin'ny www.makemeetingsmatter.com (ny 'Application'). Ny Application dia manome sehatra fitantanana vahaolana amin'ny fivoriana finday sy fidirana amin'ny vahaolana hafa mety ho hitanao fa mahasoa (ny 'Services').
1.2. Ny Applications dia miasa amin'ny Released Pty. Ltd. (ABN 93 628576027). Ny fidirana sy ny fampiasana ny Fampiharana, na izay vokatra na serivisy mifandraika aminy, dia omen'ny Released Pty Ltd. Azafady vakio tsara ireto fepetra sy fepetra ireto (ny 'Fepetra'). Amin'ny fampiasana, na fijerena ny Application, dia midika izany fa efa namaky, nahatakatra ary manaiky ho voafatotry ny fepetra ianao. Raha tsy manaiky ny fepetra ianao dia tsy maintsy atsahatrao avy hatrany ny fampiasana ny Application, na ny serivisy rehetra.
1.3. Released Pty Ltd dia manana zo hijery sy hanova ny fepetra rehetra amin'ny fanavaozana ity pejy ity amin'ny fanapahan-keviny manokana. Navoaka dia hampiasa ezaka ara-drariny mba hanomezana anao fampahafantarana momba ny fanavaozana ny Terms. Izay fiovana rehetra amin'ny Fepetra dia manankery avy hatrany manomboka amin'ny daty namoahana azy. Alohan'ny hanohizanao dia manoro hevitra anao izahay hitazona dika mitovy amin'ny fepetra ho an'ny firaketanao.
Manaiky ny fepetra ianao amin'ny fampiasana na fijerena ny Application. Azonao atao ihany koa ny manaiky ny Fepetra amin'ny alàlan'ny fanindriana hanaiky na hanaiky ny fepetra izay anomezan'ny Released Pty Ltd anao ity safidy ity amin'ny interface interface.
3.1. Mba hidirana amin'ny Serivisy dia tsy maintsy mividy famandrihana amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny tranokala (ny 'Subscription') aloha ianao ary mandoa ny sara azo ampiharina amin'ny famandrihana voafantina (ny 'Saram-boninkazo').
3.2. Amin'ny fividianana ny Famandrihana dia manaiky sy manaiky ianao fa anjaranao ny miantoka fa ny Famandrihana nofidinao hovidiana dia mety amin'ny fampiasanao.
3.3. Rehefa avy nividy ny famandrihana ianao dia takiana hisoratra anarana amin'ny kaonty amin'ny alàlan'ny Application alohan'ny hidiranao amin'ny serivisy (ny 'kaonty').
3.6. Rehefa vita ny fizotry ny fisoratana anarana dia ho lasa mpikambana voasoratra anarana ao amin'ny Application ('Member') ihany koa ianao ary manaiky ho voafatotry ny Fepetra. Amin'ny maha-mpikambana anao dia homena fahafahana miditra avy hatrany amin'ny Tolotra ianao manomboka amin'ny fotoana nahavitanao ny fizotry ny fisoratana anarana mandra-pahatapitry ny fe-potoana famandrihana (ny 'Fotoan'ny famandrihana').
(d) ny fidirana sy ny fampiasana ny fampiharana dia voafetra, tsy azo afindra ary mamela anao hampiasa ny Application irery ho an'ny tanjon'ny Released Pty Ltd manome ny Serivisy;
(e) tsy hampiasa ny Serivisy na ny Application ianao mifandraika amin'ny ezaka ara-barotra rehetra afa-tsy ireo izay ankatoavina manokana na ankatoavin'ny fitantanana ny Released Pty Ltd;
(f) tsy hampiasa ny Serivisy na Fampiharana ianao amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna sy/na tsy nahazoana alalana izay ahitana ny fanangonana ny adiresin'ny Mpikambana amin'ny alàlan'ny elektronika na fomba hafa mba handefasana mailaka tsy nangatahana na fandrafetana tsy nahazoana alalana na mampifandray amin'ny Application;
(g) manaiky ianao fa ny dokam-barotra ara-barotra, ny rohy mifandray, ary ny endrika fangatahana hafa dia azo esorina amin'ny fampiharana tsy misy fampandrenesana ary mety hiafara amin'ny fampitsaharana ny serivisy. Ny hetsika ara-dalàna mifanaraka amin'ny lalàna dia horaisin'ny Released Pty Ltd noho ny fampiasana tsy ara-dalàna na tsy nahazoana alalana ny Application; SY
(h) manaiky sy manaiky ianao fa voarara ny fampiasana mandeha ho azy ny Application na ny Serivisy.
Ny Released Pty Ltd dia hanome anao ny famerenam-bola amin'ny saram-pisoratra anarana raha toa ka tsy afaka manohy manome ny serivisy izy ireo na raha mandray fanapahan-kevitra ny Tale Mpitantana, amin'ny fanapahan-keviny tanteraka, fa mety ny manao izany amin'ny toe-javatra misy. . Raha mitranga izany, ny famerenam-bola dia ho amin'ny sandan'ny saram-pandraharahana izay mbola tsy ampiasain'ny Mpikambana (ny 'Famerenana').
7.1. Ny fampiharana, ny serivisy ary ny vokatra rehetra mifandraika amin'ny Released Pty Ltd dia iharan'ny zon'ny mpamorona. Ny fitaovana ao amin'ny tranokala sy ny fampiharana, dia voaaro amin'ny zon'ny mpamorona eo ambanin'ny lalàn'i Aostralia sy amin'ny alàlan'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Raha tsy misy fanamarihana manokana, ny zo rehetra (anisan'izany ny zon'ny mpamorona) ao amin'ny Serivisy sy ny fanangonana ny Application (anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny lahatsoratra, sary, logos, kisary bokotra, sary video, clip audio, tranokala, code, script, singa famolavolana ary endri-javatra interactive. ) na ny Serivisy dia manana na fehezina ho an'ireo tanjona ireo, ary natokana ho an'ny Meeting Solutions Pty Ltd na ireo mpandray anjara ao aminy.
a) mampiasa ny Fampiharana araka ny fepetra;
b) mandika sy mitahiry ny Application sy ny fitaovana voarakitra ao amin'ny Application ao amin'ny fitadidiana cache an'ny fitaovanao; SY
(c) pirinty pejy avy amin'ny Application ho an'ny fampiasanao manokana sy tsy ara-barotra.
Released Pty Ltd dia tsy manome anao zo hafa na inona na inona mifandraika amin'ny Application na ny Serivisy. Ny zo hafa rehetra dia voatokana mazava tsara amin'ny Meeting Solutions Pty Ltd.
7.3. Released Pty Ltd dia mitazona ny zo, ny anaram-boninahitra ary ny tombontsoa rehetra amin'ny Application sy ny serivisy mifandraika rehetra. Tsy misy na inona na inona ataonao na mifandraika amin'ny Application dia hamindra:
7.4. Tsy azonao atao, raha tsy nahazoana alalana an-tsoratra avy amin'ny Released Pty Ltd sy ny fanomezan-dàlana avy amin'ny tompon'ny zo hafa mifandraika amin'izany: mandefa, mamoaka indray, mampiakatra entana amin'ny antoko fahatelo, mandefa, mandefa, mizara, mampiseho na milalao ampahibemaso, mampifanaraka na manova amin'ny fomba rehetra ny Serivisy na serivisy an'ny antoko fahatelo amin'ny tanjona rehetra, raha tsy hoe omen'ireo fepetra ireo. Ity fandrarana ity dia tsy miitatra amin'ny fitaovana Fampiharana izay azo ampiasaina malalaka na eo amin'ny sehatry ny daholobe.
8.1. Ny Released Pty Ltd dia mandray ny fiainanao manokana ary ny fampahalalana rehetra omena amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny Application sy/na ny Serivisy dia miankina amin'ny Politika momba ny fiainana manokana, izay hita ao amin'ny tranokala.
9.3. Ny fampiasana ny fampiharana sy ny serivisy dia atahoranao manokana. Ny zava-drehetra ao amin'ny Application sy ny Serivisy dia omena anao "araka ny misy" sy "araka ny misy" tsy misy fiantohana na fepetra na inona na inona. Tsy misy amin'ireo mpiara-miasa, tale, tompon'andraikitra, mpiasa, mpiasa, mpandray anjara ary licence amin'ny Released Pty Ltd no manao fanehoana mazava na an-tsoratra na antoka momba ny Serivisy na vokatra na serivisy (ao anatin'izany ny vokatra na serivisy an'ny Meeting Solutions Pty Ltd) resahina. ao amin'ny tranokala, dia ahitana (fa tsy voafetra amin'ny) fatiantoka na fahasimbana mety ho tratranao vokatry ny iray amin'ireto manaraka ireto:
b) ny fahamarinany, ny mety na ny volan'ny fampahalalana rehetra ao amin'ny Application, ny Serivisy, na ny vokatra mifandraika amin'ny Serivisy (anisan'izany ny fitaovana sy ny dokambarotra an'ny antoko fahatelo ao amin'ny tranokala);
(c) ny fandaniana vokatry ny fampiasanao ny Application, ny Serivisy na ny vokatra avy amin'ny Released Pty Ltd; SY
10.1. Ny andraikitry ny Released Pty Ltd amin'ny totalin'ny na mifandray amin'ny Serivisy na ireo fepetra ireo, na dia mipoitra aza, ao anatin'izany ny fifanarahana, ny fanenjehana (anisan'izany ny tsy firaharahiana), amin'ny fitoviana, araka ny lalàna na hafa, dia tsy hihoatra ny famatsiana indray ny serivisy ho anao.
(d) ny fanomezana ny Serivisy ho anao avy amin'ny Released Pty Ltd, araka ny hevitr'i Meeting Solutions Pty Ltd, dia tsy azo atao ara-barotra intsony.
11.4. Araka ny lalàna manan-kery eo an-toerana, ny Released Pty Ltd dia manana zo hanajanona na hanafoana ny maha-mpikambana anao amin'ny fotoana rehetra ary mety hampiato na handà, amin'ny fanapahan-keviny irery, ny fidiranao amin'ny rehetra na ampahany amin'ny Application na serivisy tsy misy fampandrenesana raha mandika ianao. ny fepetra rehetra na ny lalàna manan-kery na raha misy fiantraikany amin'ny anaran'ny Released Pty Ltd na ny lazan'ny Released Pty Ltd na manitsakitsaka ny zon'ny antoko hafa.
mpandray anjara, mpanome votoaty avy amin'ny antoko fahatelo ary licence avy amin'ny sy manohitra: Ny hetsika rehetra, ny fitoriana, ny fitakiana, ny fitakiana, ny adidy, ny fandaniana, ny fatiantoka ary ny fahasimbana (anisan'izany ny sara ara-dalàna amin'ny fototra indemnité) natao, nijaly na nipoitra avy amin'ny na mifandray miaraka amin'ny voka-dratsiny mivantana na ankolaka amin'ny fidiranao amin'ny fampiasana na fifampiraharahana amin'ny Application na fiezahana hanao izany; ary/na izay fandikana ny fepetra.
Ny fifandraisana rehetra momba ny fifampiraharahana nataon'ny Ankolafy izay nipoitra sy mifandraika amin'ity fehezan-dalàna momba ny famahana ny fifandirana ity dia tsiambaratelo ary araka izay azo atao, dia tsy maintsy raisina ho toy ny fifampiraharahana "tsy misy fitsarana an-tendrony" ho an'ny lalànan'ny porofo azo ampiharina.
Raha toa ka 60 andro no lasa taorian'ny nanombohan'ny fanelanelanana ny disadisa ary tsy voavaha ny disadisa, ny roa tonta dia afaka mangataka amin'ny mpanelanelana hampitsahatra ny fanelanelanana ary tsy maintsy manao izany ny mpanelanelana.
Ny tolotra natolotry ny Released Pty Ltd dia natao hojeren'ny rehetra maneran-tany. Na izany aza, raha misy fifandirana mipoitra avy amin'ny fampiharana na mifandraika amin'ny Application, dia manaiky ianao fa any amin'ny fitsaran'i Nouvelle-Galles Atsimo, Aostralia, ny toerana tokana hamahana ny disadisa.
Ny fepetra dia fehezin'ny lalàn'i New South Wales, Aostralia. Ny fifandirana rehetra, ny fifandirana, ny fandehanana na ny fitakiana na inona na inona toe-javatra mipoitra na amin'ny fomba rehetra mifandraika amin'ny fepetra sy ny zo noforonina eto dia hofehezina, adika ary adika amin'ny, araka ny lalànan'i New South Wales, Aostralia, tsy misy fanondroana ny fifanoheran'ny foto-kevitry ny lalàna, na dia eo aza ny fitsipika tsy maintsy atao. Tsy toherina ny maha-azo itokiana io fehezan-dalàna mifehy io. Ny Fepetra dia mifamatotra amin'ny tombotsoan'ny antoko eto sy ny mpandimby azy ary ny andraikitr'izy ireo.